4 nhetembo huru dzeChishanu Chakanaka. Asingazivikanwe, Lope, Machado uye Mistral | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Nhetembo
Holy Week. Mahoridhe, mazororo, torrijas uye stews, mafambiro uye mahombekombe, kutenda uye kushoma kutenda Y mazuva ekuverenga. Gap iyo yatinozotorera kuti titore bhuku raunoda kana kuverenga zvekare vamwe. Ini ndinoenda kumba mazuva ano uye ini ndinowanzo tora iwo mukana kusiyanisa iwo kuverenga. Saka ndawana ne nhetembo, chirevo che Iwo 25.000 akanakisa mavhesi emutauro wechiSpanish.
Una Chinyorwa che1963, uye Readers 'Circle, yakanyorerwa vabereki vangu. Mukana wakagadzira izvo, pandino vhura, ndakaona izvo Sonnet kuna Jesu Akarovererwa yemavambo akanaka kudaro. Saka ava vauya kwandiri nhetembo ina uyo akanyora mana makuru -kuti asingazivikanwe, Lope de Vega, Antonio Machado naGabriela Mistral-. Kune vatendi nevasiri vatendi. Kune ese. Ngatingovaverengei uye tinakidzwe nokunaka kwavo.
1 Sonnet kuna Jesu Akarovererwa - Asingazivikanwe (XNUMXth Century)
2 Chii chandinacho icho hushamwari hwangu hunotsvaga? - Lope de Vega (1562-1635)
3 Iyo saeta - Antonio Machado (1875-1939)
4 Husiku - Gabriela Mistral (1889-1957)
Sonnet kuna Jesu Akarovererwa - Asingazivikanwe (zana ramakore rechiXNUMX)
Hazvifambise ini, Mwari wangu, kukuda
kana gehena harinditenderi kutya zvakadaro
Munondifambisa, Ishe, fambisai kuti ndikuonei
akarovererwa pamuchinjikwa uye kusekwa,
ndifambise kuti ndione muviri wako uchikuvara zvakanyanya,
Ndiri kubatwa nehama dzako uye kufa kwako.
Ndifambise, muchidimbu, rudo rwako, uye nenzira yakadaro,
kuti kunyangwe dai pasina denga, ndinokuda,
Uye kunyangwe dai pakange pasina gehena, ini ndaizotya iwe.
Haufanire kundipa nekuti ndinokuda
Zvakanaka, kunyange izvo zvandinovimba zvisingamirire,
zvakafanana kuti ndinokudai ndingadai ndakakudai imi.
Chii chandiinacho chinotsvaga ushamwari hwangu? - Lope de Vega (1562-1635)
Chii chandiinacho chinotsvaga ushamwari hwangu?
Unofarira chii, Jesu wangu,
kuti pamusuwo wangu wakafukidzwa nedova
Unopedza husiku husiku hwerima here?
Oo mukati mangu makanga makaoma sei,
Zvakanaka, ini handina kuvhura! Chishamiso chakadii,
kana chando chando chekusatenda kwangu
yakaomesa maronda emiti yako yakachena!
Ngirozi dzakandiudza kangani kuti:
«Alma, zvino tsamira pahwindo,
iwe uchaona nerudo rukuru kudaidza kushingirira »!
Uye vangani, runako rwechangamire,
"Mangwana tichanovhura," akapindura,
kwemhinduro imwe chete mangwana!
Museve - Antonio Machado (1875-1939)
Oo, museve, kuimba
kuna Kristu wevaGypsy,
nguva dzose neropa mumaoko angu,
nguva dzose kuvhura!
Imba nezvevanhu veAndalusi,
kuti chitubu chega chega
Imba nyika yangu,
iyo inokanda maruva
kuna Jesu wekutambudzika,
uye iko kutenda kwevakuru vangu!
Hausi rwiyo rwangu!
Handikwanise kuimba, uye ini handidi
kuna Jesu iye ari pamuti,
asi kune uyo akafamba mugungwa!
Husiku - Gabriela Mistral (1889-1957)
sei uchikanganwa ini!
Wakarangarira muchero muna Kukadzi,
apo ruby ​​yaro pulp inovava.
Rutivi rwangu rwakavhurika futi,
uye haudi kunditarisa!
Wakarangarira sumbu dema
ndokupa kuchisviniro chewaini chitsvuku;
uye uchikurudza mashizha emupopura,
nemweya wako, mumhepo isina kujeka.
Uye muchisviniro chewaini chakafara
hausati uchida kudzvinyirira chipfuva changu!
Kufamba ndakaona ma violets akavhurwa;
falerno yemhepo yandakamwa,
uye ndakadzikisira, yero, maziso angu,
yekusaona mamwe Ndira kana Kubvumbi.
Uye ini ndakasimbisa muromo wangu, mafashama
yedzimba dzandisina kufanira.
Makarova gore rematsutso
uye iwe unoda kutendeukira kwandiri!
Uyo akatsvoda padama rangu akanditengesa;
Akandiramba nekuda kwehembe yekureva.
Ini mundima dzangu kumeso neropa,
saIwe pamucheka, ndakamupa,
uye mubindu rangu usiku, vanga vari ini
Coward John uye Ngirozi ine Hasha.
Kuneta kusingaperi kwauya
kutarisa mumaziso angu, pakupedzisira:
kuneta kwezuva raanofa
uye imwe yemambakwedza inofanira kuuya;
Kuneta kwedenga kwedenga
uye kuneta kwedendigo denga!
Iye zvino ndinodonhedza shangu yekufira
uye mabraids achikumbira kurara.
Uye ndakarasikirwa nehusiku, ndinomuka
kuchema kwakadzidza kubva kwaMuri:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » 4 nhetembo huru dzeChishanu Chakanaka. Asingazivikanwe, Lope, Machado uye Mistral
Iwe unoziva iyo yemahara email sevhisi 'Bookflash'?
Nhoroondo yeIsita iyo yatinogara tichiona. Sei tisingaverenge mabhuku acho?